CODKAAGA KU CIIDAMI-2 SOCDAALKEYGII AWDAL | Somaliland.Org
November 27, 2012	Waxay ahayd casar gaab isniineed xiligaan la safaray wafdiga Madaxweyne Xigeenka Mudane Cabdirahman Saylici oo u ambabaxay gobalada galbeedka. Waxaanu galnay maqrib dabadeed magaalada Boorame anagoo sii marnay dariiq dheer oo laami ah bal se u baahan dayac tir iyo dhammeystir ay ka muuqato hawl qabyo ah oo socota oo hareeraha ay tuulantay ciid iyo dhaxii dhismaha. Waa jid laami ah oo bilaha soo socda si wacan u dhoweyn doonaa safarka Hargeysa iyo Boorame. Habeenkaas salaan iyo is wareysi mas’uul iyo odayada bulshada oo koox koox ah ayey ahayd. Subaxii salaasadana waxaa bilaabmay is-aragii rasmiga ahaa ee wafdiga iyo xukuumadda gobalka. Waxa wafdiga ku wehelinaaya Madaxweyne Xigeenka Wasiirada Gobalka: Wasiirka Dib-u-dejinta, Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha Bulshada, Wasiirka Beeraha, iyo Wasiir Xigeenka Wasaaradda Waxbarashada, iyo aniga oo ah La-taliyaha Madaxweynaha ee Dhaqaaalaha, Ganacsiga iyo Maalgashiga. Xiligii shaqadu kolkay dhammaatay, waxa bilaabmay hawshii xisbi xaakimka ee KULMIYE oo berrito oo Arbaca ah leh bandhigii ugu dambeeyey ololahooda. Waxa Isagu yimid maamulkii degmooyinka gobalka sida Boorame, Lughaya, Boon iyo Baki. Waxa gubaabo iyo talooyin hawl-gal ah leysla qaatay dhammaan ergooyinkii iyo hoggaamadii xisbiga ee demooyinka. Waxaana ambabaxay mas’uulintii xisbiga ee ka yimid degmooyinka ka baxsan Boorame. Waxa leysla qaatay in berrito la muujiyo cududa iyo awoodda xisbi ee gobalka iyadoo la dhowraayo sharciga iyo nabadda guud.
Waxaan qudbadayda dib ugu dhigi doonaa maqaalka kan xiga. Waxa madasha soo xidhay Madaxweyne xigeenka oo tusaaleeyey sida barnaamajkii Kulmiye wax loogu qabtay, sida Kulmiye u rabo in la helo Gole degaan oo la wadaaga siyaasadda horumarka dalka iyo in laga digtoonaado in siyaasadda dalka ee tobanka sano ee soo socda ay ku kaliyeystaan dad aan khibrad iyo waayo-aragnimo midna lahayn. Hogaankan la tijaabiyey ee Kulmiye ayey danta guud ku jirtaa…ayuu ku soo gunaanaday Maxaweyne xigeenku. Qiimeyn iyo Qadarin
Previous PostBisha Cas ee Imaaraadka laba kun oo Qoys oo degan Burco Iyo BuuhoodleNext PostPresident Silaanyo: A Leader with a Mission and Mandate who gives a Voice to a Voiceless Nation	Blog